ရှစ်လုံးထိုး တစ်တန်းအင်ဂျင် ရှိပါလား
ရှစ်လုံးထိုးတစ်တန်းအင်ဂျင်ရှိပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ရှစ်လုံးထိုးအတန်းတစ်တန်းတည်းအင်ဂျင်ကို တည့်ရှစ်(Straight Eights) ဟုစက်မှုလောကတွင်ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းကြသည်။
Saturday, 02 February 2019 13:19
Nissan GTR (R35) ရဲ့ ပါဝါခွဲဝေမှုပုံစံ
အောက်က ပုံလေးကိုကြည့်ပြီး R35 ရဲ့ဖွဲ့စည်းထားပုံကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။ ပထမဆုံးအရှေ့ ပိုင်းကနေစကြည့်ရင် တာဘိုချာဂျာ ၂ လုံးအတွက် အလယ်မှာ အင်တာကူလာ ၂ လုံးပါပါတယ်။
Saturday, 02 February 2019 12:53
မြင်းကောင်ရည် (HP) ဆိုတာ
အင်ဂျင်တွေမှာအသုံးများတဲ့ ပါဝါ ယူနစ် ၃ မျိုးရှိပါတယ်။
Friday, 01 February 2019 17:09
4WD Off road SUV စတဲ့ ကားတွေ့ရှေ့ ဘေးနားလေးမှာ ပါတတ်တဲ့မီးခိုးခေါင်းတိုင်
4WD Off road SUV စတဲ့ ကားတွေ့ရှေ့ ဘေးနားလေးမှာ ပါတတ်တဲ့မီးခိုးခေါင်းတိုင်လို ဟာလေး ကတော့ Safari Snorkel လို့ လူသိများပါတယ်။
Thursday, 31 January 2019 15:24
Flat engine (or) Horizontally-opposed engine (or) Boxer engine
Internal combustion engine တွေထဲမှာ မေ့ထားလို့မရတဲ့ Boxer Engine ဆိုပြီး လူသိများတဲ့ အင်ဂျင်အမျိုးအစားကိုတော့ ၁၈၉၆ မှာ ဂျာမန် အင်ဂျင်နီယာ Karl Benz က patent လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Wednesday, 30 January 2019 14:38
ငါကားက မင်းကားထက် ပိုမိုက်တယ်....ငါကားကပိုမိုက်တယ်
ကားတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်ကားက ဘယ်ကားထက်သာတယ်ဆိုတာငြင်းတတ်ကြသလို သိလည်းသိချင်ကြပါတယ်။
Wednesday, 30 January 2019 14:02
VOLKSWAGEN ကားသစ်လေးတွေရဲ့ body နဲ့ engine မှာရေးထားတဲ့ TSI ဆိုတာဘာလဲ
automaker အများစုက အခုချိန်မှာ Hybrid နဲ့ electric ကားတွေကို ဦးစားပေးဖော်ထုတ်နေပေမယ့် Volkswagen ဂျာမနီအဖွဲ့ကတော့ ဓာတ်ဆီ engine အပေါ်သံယောဇဉ် မကုန်ဘဲ ခေတ်နဲ့အညီ အဆင့်ထပ်မြှင့်ခဲ့ပါတယ်။
ဂီယာဘောက်စ် CVT အကြောင်း
ရည်ရွယ်တာက ကားအကြောင်း မသိသေးသူများကို ယျေဘုရ general လေးပဲ သိစေချင်တာပါ။ CVT ပါ။
Monday, 28 January 2019 16:44
Thermostat က အင်ဂျင်ပူအောင်လုပ်တာလား
ခုချိန်ထိ Thermostat ဆိုရင် "အင်ဂျင်ပူအောင်လုပ်တာ..." "မြန်မာပြည်က ပူတယ်" "မလိုဘူး...ဖြုတ်" "ဂျပန်မှာက အေးလို့တပ်ထားတာ" စသည်ဖြင့်ကြားနေရပါသေးတယ်။
လူသိများသော်လည်း နည်းနည်းရော ထွေးနေတဲ့ EFI စနစ်သုံး sensor ၂ ခု အကြောင်း
EFI စနစ်သုံး ကားတွေမှာပါတဲ့ sensor တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူသိများသော်လည်း နည်းနည်းရော ထွေး နေတဲ့ sensor ၂ ခု အကြောင်းရေးချင်ပါတယ်။
Saturday, 26 January 2019 11:01
ကားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Exhaust Gas Recirculation (EGR) စနစ်အကြောင်း
ကားနဲ့ပတ်သတ်သူ အားလုံးအား ကိုယ်သိသလောက် လေးကို စနစ်တကျ (theory ကျကျ)သိစေချင်တဲ့ စေတနာပါ။ EGR အကြောင်းကတော့ လူသိနည်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကားဟောင်းတွေ လှည့်ပတ်စီးနေတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လို့ EGR နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပြသနာ အဖြစ်များပါတယ်။ အင်ဂျင် ချက်မီး လို့ခေါ်တဲ့ Check engine light ပေါ်ပါတယ်။ လူတိုင်းလန့်တတ်တဲ့ danger မီးဂျီးပါ။ EGR စနစ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကတော့ ရှင်းပါတယ်။ engine exhaust gas မီးခိုးရဲ့ ၅ % ကနေ ၁၅ % ကို အင်ဂျင် intake manifold လေအဝင်လိုင်းကို ပြန်ထည့်ပေးတဲ့ စနစ်ပါ။ အင်ဂျင် combustion chamber ထဲမှာ လောင်ကျွမ်း ပြီးသား မီးခိုးတွေကို ဘာလို့ပြန်ထည့်တာလဲ ? emission control လုပ်ချင်လို့ပါ။ emission ဆိုတဲ့ အင်ဂျင် အထွက်မီးခိုးတွေထဲက သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ NOx လို့ရေးတဲ့ နိုက်ထရိုဂျင် အောက်ဆိုဒ်တွေ မထွက်ရအောင် လုပ်ပေးတာပါ။ အင်ဂျင်အဝင်လေလိုင်းထဲကို အထွက်မီးခိုးတွေ ပြန်ထည့်ခြင်းဖြင့် အဝင်လေကို လျော့ကျစေပါတယ်။ ပြန်ဝင်လာတဲ့ မီးခိုးတွေက နေရာအချို့ ဝင်ယူလိုက်လို့ပါ။ အဲ့တော့ အင်ဂျင်အဝင် လေထဲမှာ မီးခိုးရောပြီး အောက်ဆီဂျင် နည်းသွား ပါတယ်။ အောက်ဆီဂျင် နည်းသွားတဲ့အတွက် combustion chamber ထဲမှာ လောင်ကျွမ်းမှု လျော့နည်းစေပြီး အပူချိန်ကျစေပါတယ်။ အဲ့ဒိအတွက် အင်ဂျင် လောင်ကျွမ်းမှုအပူချိန်အမြင့်မှာမှ ထွက်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ NOx တွေမထွက်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါဟာ ယနေ့ခေတ် တ green ထဲ greenပြီး ခေတ်စားနေတဲ့ Green system ပါ။ EGR ကိုစသုံးတဲ့ အချိန်ကတော့ အင်ဂျင် အထွက်နဲ့ အဝင်ကို ပိုက်လိုင်းသွယ်ထားရုံပါပဲ။ orifice တော့ ခံတာ ပေါ့လေ။ အကျိုးဆက်ကတော့ စက်နှိုးရခက် မယ် idle (စလိုး) ကြမ်းမယ် အင်ဂျင်အဆွဲအရုံး ကျတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ 1973 ကမှစပြီး အထွက်မီးခိုးကိုလိုအပ်တဲ့ အချိန်ပဲ အဝင်လေလိုင်းထဲ ထည့်ဖို့ ဗားတွေ တပ်ဆင်လာပါတယ်။ အရင် သွယ်ထားတဲ့ပိုက် လိုင်းကြားမှာ ဗားခံလိုက်တာပါ။ အင်ဂျင် temperature sensor ကိုအခြေခံပြီး အင်ဂျင် operation temperature ရောက်မှ EGR valve ကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။ ယခင်ကတော့အင်ဂျင်လေဟာနယ် vacuum line နဲ့ အပိတ်အဖွင့်လုပ်ပါတယ်။ Pneumatic EGR valve ပါ။ အခုကျွန်တော်တို့စီး နေကြတဲ့ demio. swift. vitz. fit စတာတွေမှာတော့ electric EGR ပေါ့။ EGR ဗားပေါ်မှာ ဝါယာကြိုး တပ်ထားတာတွေ့မှာပါ။ အင်ဂျင် ရဲ့ temperature sensor, MAF sensor နဲ့ rpm sensor တွေအကူအညီနဲ့ ECU ကနေအပိတ်အဖွင့် လုပ်ပါ တယ်။ အင်ဂျင် အဝင်လေသန့်ကိုမှ ပြိုင်ကားတွေမှာ အောက်စီဂျင်ပိုရအောင် N2O ဗူးတွေတပ်ပြီး ထပ်ဖြည့်တာ movie တွေမှာတွေ့ဖူးမှာပါ။ ခုဟာက အဝင်လေသန့်ကို လောင်ပြီးသားမီးခိုးတွေ ထပ်ထည့်တော့ အင်ဂျင် အဆွဲအရုံး (performance) ကျပြီပေါ့။ ဒါပေမယ့်ကောင်းတာလေးတွေကတော့ အင်ဂျင် လေအဝင်တွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ throttling losses လို့ခေါ်တဲ့ အင်ဂျင် ပစ်စတင်က လေကိုဆွဲယူ အပြီး လေလိုင်းထဲမှာ ကျသွားတဲ့ ဖိအားကို မီးခိုးတွေပြန်ထည့်ခြင်းက ဖိအားပြန်ပေးလိုက်လို့ losses နည်းသွားပါတယ်။ ပြန်ထည့်မီးခိုးကြောင့် အင်ဂျင်တွင်း လောင်ကျွမ်းမှုအပူချိန်ကျတဲ့အတွက် NOx မထွက်စေ တဲ့အပြင် အင်ဂျင် အပူချိန်ကျတဲ့အတွက် thermal energy လို့ခေါ်တဲ့ အင်ဂျင်အပူတွေ အများဂျီး မဆုံးရှုံးတော့ပါဘူး။ cooling system ပါသက်သာ စေပါတယ်။ EGR ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုသိရင်တော့ ပြသနာကို များများစားစားရှာစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အင်ဂျင်အထွက်မီးခိုးကို ပိုက်လိုင်းသွယ်ပြီး ဗားနဲ့ အပိတ်အဖွင့်လုပ်မှတော့ ကပ်ပြီပေါ့ ဂျိုးတွေ။ ကားအသုံးများလာတာနဲ့အမျှ ကာဗွန်ဂျိုးတွေဟာ EGR ဗားရော ပိုက်လိုင်းမှာပါ ပိတ်လာတာနဲ့ rough idling စ ပါပြီ။ ဆီတွေစားပါပြီ။ အဆွဲအရုံးကျပါပြီ။ ပြီးတာနဲ့ ကိုရွှေ ချက်မီး လင်းပါပြီ။ OBDII စက်ထိုးပါက ထွက်လာတဲ့ code တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မရေးတော့ ပါဘူး internet မှာ ပေါပါတယ်။ ကံကောင်းရင်တော့ EGR ဗားနဲ့ လိုင်းကိုဆေးရုံနဲ့ ရပါတယ်။ ဗားမကောင်းရင်တော့ ဗားပါလဲရပါမယ်။ Source: Lin Htet (Engineering Explained) Read:ကျပ်သိန်း ၄၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ The All-New BMW X5 ကားမြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်မိတ်ဆက်